१५ असार, हेटौंडा । बर्षाको समयमा सरुवा रोगको जोखिम धेरै हुने भएकाले खानपानमा विशेष ध्यान दिन डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन् । अधिकांश रोगको प्रमुख कारक अशुद्ध पानी नै भएकाले पानी उमालेर पिउने वा शुद्धिकरण गरेर पिउने बानीले रोगबाट बच्न सकिने इपिडिमियोलाजी तथा रोक नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर चुमनलाल दासले आग्रह गरेका छन् । फोहोर...
प्रत्येक वर्ष ढुङ्गा पनि चिल्याउने ढुङ्गामै फूल फुलाउने खुशी बोकेर आउँछ असार । हास्ने मौका नपाएझैँ ओझेल परेर बसेका बाउसे र रोपारहरू जब असारे मुर्छुन्नाले नाच्न थाल्छन् त्यतिखेर ! लाग्छ मलाई चिल्लाएको ढुङ्गा बनी बसूँ या त पानीको थोपा बनी भुँइमा खसूँ ? दूर लाहुरबाट लामो याद र छोटो बिदा बोकेर प्रत्येक वर्ष दसैँमा घर...
१५ असार, हेटौंडा । वर्षात सुरु भएसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा हैजाका विरामी भेटिन थालेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका मात्रै १२ जनामा हैजाको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । काठमाडौंमा समुदायस्तरमा हैजा फैलिएको महाशाखाले जनाएको छ । काठमाडौंका बिभिन्न १० स्थानका पानीमा गरिएको परीक्षणमा हैजा...
१५ असार, हेटौंडा । फलफूल पकाउन प्रयोग हुने कार्वाइड (एसिटिलिन ग्यास) प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सूचना जारी गर्दै फलफूलको आयात, उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा संलग्न सबै व्यवसायीलाई एसिटिलिन ग्यास प्रयोग गर्न निषेध गरेको जनाएको छ । आँप लगायत फलफूल खरिद गर्दा कार्टुन वा क्रेटमा फलफूलको...
१५ असार,हेटौंडा। मंगलबार राति देखीको अविरल बर्षाका कारण पहिरो जादा देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध बनेका छन्। पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ।आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ स्थित ऐनापहरामा पहिरो जाँदा आज बिहानदेखि उक्त सडकखण्ड अवरुद्ध भएको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी खहरेमा...
१५ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै यसको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको जनाएका छन् । राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले यस्तो जनाएका हुन् । उनले सरकारले व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा जलवायु अनुकूलित, पोषणयुक्त...
१५ असार, काठमाडौं । बुधबार देशभर भारी वर्षाको संभावना रहेकोले सर्तक रहन जल तथा मौसम विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । धेरै स्थानहरुमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भईरहेको छ र यो अवस्था दिनभरी नै रहन सक्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो । प्रदेश नं १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी...
१५असार,हेटौंडा। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले शुभकामना सन्देश दिएका छन्। बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै असार १५ अर्थात मानो रोपेर मुरी उब्जाउने महिनाको मध्ये दिन नेपाल सरकारले १८ साल अघीबाट आजकै दिन धान दिवस...
१५ असार, हेटौंडा । अमेरिकाको टेक्सास राज्यको बाहिरी क्षेत्र सेन एन्टेनियोमा रहेको एक ट्रकमा मृत भेटिनेको सङ्ख्या ४६ पुगेको छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार ट्रकमा मृत भेटिने सबै आप्रवासी नागरिक थिए । ट्रकमा सवार कम्तिमा १६ जनालाई गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पु¥याइएको छ । उनीहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पनि बीबीसीले लेखेको छ...